Ra'iisul Wasaare Kheyre oo Maanta tegaya Cabudwaaq
28 June, 2019 in Wararka by BANA Mogdishu Office
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xsan Cali Kheyre oo weli ku sugan Magalada Cadaado iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa Maanta waxaa lagu wadaa in uu safar ku tago degmada Cabduqwaaq ee gobolka Galgaduud.
Shalay gelinkii dambe waxaa gaaray wufuud horudhac u ah safarka ra’iisul Wasaaraha oo ay ka mid yihiin Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka ee Xukuumada Soomaaliya Mudane Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal iyo Madaxweyne kuxigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabeey.
Sidoo kale Xildhibaano, iyo xubno kale oo ka mid ah Wafdiga Ra’iisul Wasaaraha ayaa tegay degmada Cabudwaaq,iyaga oo sii diyaarinaya sidii Ra’iisul Wasaaraha soomaaliya loogu soo dhaweyn lahaa degmada Cabudwaaq.
Magalada Cabduwaaq ayaa waxaa laga dareemayaa u diyaar garowga soo dhaweynta Ra’iisul Wasaaraha,waxaana meelaha qaar lagu dhejiyay sawirka Ra’iisul Wasaaraha,waxana ammaanka siweyn u adkeynaya qaar ka mid ah ilaaladiisa iyo Ciidamo ka tiursan dowladda oo Cabudwaaq ku sugan.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa markii uu tago degmada degmada Cabudwaaq waxaa uu kulamo la qaadan doonaa Mas’uuliyiinta degmadaas iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada iyo Odayaasha degmadaas si uu wadatashiyo ula yeesho.
Fahad Yaasiin oo safar deg deg ah ku tegaya Dhuusomareeb
Soomaaliland Oo Hubkii ugu Badnaa Maanta Gacanta Loo Geliyey
Farmaajo oo diiday xil ka qaadis uu RW Kheyre ku sameeyay Taliye Xijaar
the background of the new autonomy president Visits: 688805
What 9 World Leaders Were Doing in Their 20s Visits: 43678
Somalia Lost a Career Diplomat, Veteran Politician, Prolific Writer and Pan-Somalist Visits: 38919
Walaalkiisa Dile Oo Maanta Mansab Doon Ah Visits: 34056
54 Sano Kadib Maxaa Keeney In DM Ay Taagnaadaan Meeshii Ay Joogeen 1960 Visits: 28734
Dhaawacyada Injineero Turki ah oo saakay laga qaaday magaalada Muqdisho Visits: 48
Khilaaf ka taagan Cida hogaamineysa Guddiga Doorashada Madaxweynaha Galmudug Visits: 36
Wararkii ugu dambeeyey qarax ka dhacay duleedka Muqdisho Visits: 115
Uhuru Kenyatta oo isku shaandheeyey golihiisa Wasiirada Visits: 107
Saraakiil ka tirsanaa Al-Shabaab oo duqeyn lagu dilay + Magacyada Visits: 111